Dawladda Dalka Britain Oo Go’aamisey In Laga Tarxiilo Dalkaasi Wiil La Dhashay Mo Farax Oo Ay Walaalo Yihiin Loona Tarxiilo Dalka Soomaaliya |
Dawladda Dalka Britain Oo Go’aamisey In Laga Tarxiilo Dalkaasi Wiil La Dhashay Mo Farax Oo Ay Walaalo Yihiin Loona Tarxiilo Dalka Soomaaliya
London-(SLL)-Wiil la dhashay Orodyahanka caanka ah ee Maxmed Faarax oo lagu magacaabo Axmed Faarax ayaa dawladda dalka Britain go’aamisey in laga tarxiilo dalka Britain, loona musaafuriyo dalka Soomaaliya, isagoo ka cabsi qaba in la dilo, hadii si khasab ah dib loogu celiyo.
Ahmed Farah oo 27 sano jir ah ayaa Britain la geeyay isagoo 2 sano jir ah, isagoo walaalkii Mo Farah uu xilligaas ahaa 8 jir.
Wiilkan ayaa dhowaan dhameystay xabsi afar sano iyo badh uu ku jiray, kadib markii la xukumay, waxaa lagu eedeeyay weerar mindi loo adeegsaday oo xilli hore isaga iyo koox kale ay u geysteen nin kale.
Ahmed Farah ayaa u sheegay Jariirada Sunday Mirror inay khatar tahay in xilligan dib ugu laabto Soomaaliya, waxaa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in noloshiisa ay ku dhamaato dhimasho, isagoo xusay in aanu dareemeyn wax rajo ah.
Walaalkii Mo Faarax ayaan illaa hadda ka hadal masaafuriska loo qoondeeyey walaalkii Axmed Faarax.